Ukongiwa kwamanzi emvula
Ukungabikho kwezimvula nokuntuleka kwamanzi sekuvulele abantu amathuba emsebenzi nokuqeqesheka. UMasipala waseMzumbe wamukele uhlelo olongamelwe uMnyango wezokubusa ngokubambisana nobuholi bendabuko wokongizwa kwamanzi. Loluhlelo olubizwa i-Rain Water Harvesting training, lapho kuqeqeshwa abantu abangama shumi amabili (20) ukuba baqede izinsuku eziyisi shiyagalombili (8) beqeqeshelwa, ukongiwa kwamanzi, ukufaka amathange amanzi,nokulungisa izinsiza zokusebenza.
Kulezinsuku eziyisishiyagalombili (8), ezintathu (3) zachithwa emakilasini befundiswa kabanzi ngomsebenzi, beqeqeshwa umuntu onesipiliyoni kulomkhakha. Bese kuthi eziyisihlanu (5) ngezokuya ensimini beyozibambela mapthupha. Kumanje basebenzela laphaya kwaWard 14 lapho bewenzela ezindlini ezintathu ezakhiwayo khona . Abantu abangenela loluhlelo kumele babenomazisi, ibanga leshumi nanye (Grade 11) kuyangaphezulu. Abantu asebephothule zonke izigaba bathola izitifiketi (NQF Level 3) ezigunyazwe yi-SETA, okuyinhlangano ebhekelela ukuqeqeshwa kwabantu ngokusemthethweni. Kanti futhi kuyaye kuhlolwe ukuthi ngabe izitifiketi ziyabasiza yini abantu ukuba bazithuthukisa ngokwabo.
Umphathi wezokuhlaliswa kwabantu uMnu Mphilisi Hlongwa, uthe, “Siyajabula ukuthi uMnyango wezokuHlaliswa kwabantu ukhethe thina ukuhlomula kulokuhlelo.”
Umnu Hlongwa uqhube wathi laba abangamashumi amabili abakhethiwe bangosonkontileka abasafufusa abadlule ekuhlungweni okunqala ukuze baqokwe ukuthola loluqeqesho. Bekunezidingo ebekumele bahlangabezane nazo ekufaka phakathi ukuba sesimweni esihle sezinkampani zabo zokwakha.
Omunye wabahlomulile uBongumusa Msomi uthe, “Kuyangijabulisa kakhulu ukuthola lelithuba nokuhlomula ngolwazi nekhono lokufaka amathange. Lelikhona enginalo manje lizolekelela kakhulu kazi njengoba kuntuleka kakhulu kanje amanze endaweni esizakhele.”